Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » Incwadi kunye nohambo ngokuzithemba kwiiNdawo zokuHlala zeSandals
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts - iiholide ezingenalo ixhala
Nokuba iindwendwe sele zibhukishe ukuhlala nakweyiphi na yeeNdawo zokuHamba ezibutofotofo zeSandals, okanye ukuba ngaba ngabahambi-bahambi bacinga nje ngayo okwangoku, kwiSandals amava eholide yile yeholide engenaxhala.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts zibonisa ezona ndlela zintle kunye nemigaqo-nkqubo eyilelwe ukubeka iingqondo zeendwendwe ngokukhululekileyo.
Nokuba kukubhukisha okhoyo okanye okuza kwenziwa kungekudala, iindwendwe zinokuqiniseka ukuba iiSandals zizigqumile.
Ukusuka kwi-inshurensi yokukhusela ukuhamba ukuya kwigumbi lokurhoxisa ukucoceka nangaphezulu, iiSandals ziye zacinga ngayo yonke imiba yekhefu elingenaxinzelelo.
Isicwangciso sokuKhusela i-Inshurensi ikuthi!
Ukunceda ukukhusela iimfuno zakho kukuBaluleka kwethu! Yazisa yethu entsha Isicwangciso soKhuseleko lokuHamba. Wena kunye nabantu obathandayo ninako ukufumana iparadesi yokwazi konke ukubhukisha okwenziwe ngoku nge-31 ka-Agasti ka-2021 yokuhamba de kube ngu-Disemba 31, 2022 uya kufumana ngokuzenzekelayo i-inshurensi yeendleko zonyango ngexesha lokuhlala kwakho kwaye kubandakanya izibonelelo ezininzi ngelixa ungekho. Eyona nto intle kunayo yonke, ikuthi, ithengwe egameni lakho kunye nenxalenye yobhukisho lweembadada.
Ukurhoxiswa kwamagumbi asimahla kwaye ufumane iMbuyekezo eyi-100%
Ukurhoxiswa kwamagumbi asimahla okubhukisha kurhoxisiwe kwiintsuku ezingama-31 okanye nangaphezulu ngaphambi komhla wokungena (ngaphandle kwee-Over-The-Water Suites). Oku kusebenza kuphela kwinxalenye yomhlaba / yegumbi lokubhukisha. Ukurhoxiswa kwendiza kuxhomekeke kwizohlwayo zenqwelo moya kunye nezithintelo.
Umgaqo-nkqubo wePlatinam wococeko
Inkqubo eyongezelelweyo kunye nemigangatho yokucoceka eqinisekisiweyo yokuqinisekisa ukuphakama kwempilo nezokhuseleko amanyathelo iindwendwe ezifuna uxolo lwengqondo kwiCaribbean.
Ukungena kwakhona kwe-US / Canada kuyimfuneko kwi-COVID-19 yoVavanyo lwaSimahla kwiHotele
Lonke uhambo oluya e-US nase-Canada luyacelwa ukuba bathathe uvavanyo lwe-COVID-19 lokungena kwakhona. Ukuqinisekisa ukuba oku kuphazamiseka okuncinci kwiholide yakho, sikulungiselele ukuba ube nokuvavanywa kwe-antigen ye-COVID-19 eyenzelwe abemi base-US kunye nokuvavanywa kwe-PCR kubahlali baseCanada kanye kwintuthuzelo yeholide yakho. Iimvavanyo ziya kuqhutywa ziingcali zonyango ezivunyiweyo nezisetyenziswayo ngoncedo olukhulu kunye nokuphazamiseka okuncinci kumava akho eholide. Oku kuyakwenziwa kwisithuba seeyure ezingama-72 phambi kokumka kwakho kwaye iziphumo zakho zovavanyo ziya kufumaneka ngaphakathi kweeyure ezingama-24-48.